Kedu onye na-arụ ọrụ ekwentị nwere Internetntanetị kachasị ọsọ na 4G LTE? Ulator Emulator.online ▷ 🥇
N'Itali, netwọk mkpanaka agbanweela nnukwu mgbanwe ma e jiri ya tụnyere oge gara aga na mgbe njikọta n'etiti abụọ n'ime isi ndị ọrụ ntanetị anọ, Wind na atọ, anyị abanyela n'ọhịa nke onye ọrụ Iliad, nke ya na ọnụego ya dị ala. ọ na-eme asọmpi ya na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ọdịnala (ihe karịrị nde ndị ọrụ 3 n'otu afọ na ọkara). Ma n'etiti ndị ọrụ a niile Kedu ndị ị ga-ahọrọ dabere na ọsọ nke njikọ Internetntanetị gị? Ọ dị mfe ịnwe nkwa ụgha nke mgbasa ozi na eserese ndị ọrụ nyere onwe ya (na-abụkarị ụgha) wee tụọ aka na onye ọrụ na-ezighi ezi maka obodo anyị ma ọ bụ maka mpaghara anyị bi na ya.
Ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ ịchọpụta nke onye na-ahụ maka ekwentị nwere Internetntanetị kachasị ọsọ na 4G LTE N'ebe anyị, ị rutela ntuziaka kwesịrị ekwesị: ebe a anyị ga-egosi gị ule nnwale niile nke ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọrụ nke ndị ọrụ dị iche iche n'onwe ha mere, ka ị nwee ike ịmata nke ọma ma ọ bụrụ na enwere mkpuchi dị n'okporo ámá ebe anyị bi (dị mkpa nwee ezigbo ọsọ) na ọsọ ole anyị nwere ike iru na onye ọrụ ahọpụtara.
G ALKWUO: Ngwa nyocha data ntanetị data
Onye na-ahụ maka ịntanetị kachasị ọsọ na LTE
N'isiokwu ndị na-esonụ, anyị ga-egosi gị ule ndị ọzọ mere iji lelee ọsọ nke njikọ ịntanetị na mba niile na, maka ndị chọrọ ịmata ọsọ ọsọ n'obodo ma ọ bụ n'okporo ámá ebe ha bi, anyị ga-egosi gị ngwaọrụ enwe ike ịme ule ahụ n'onwe ya, na-enweghị ịzụta mbụ SIM ahụ. Oge ahụ Anyị ga-ahụ naanị teknụzụ 4G LTE, ka juru ebe niile ma nwee ike inye ezigbo ọsọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile (anyị na-ahụ 5G naanị na nnukwu obodo).
Nnwale ahụ nwere onwe ya
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ozugbo nke kacha mma Italian ọrụ na nkezi ọsọ na mobile akara, anyị nwere ike ibudata ma nyochaa PDF awa site SpeedTest, nke a na-enweta kwa afọ na netwọk ngwa ngwa na Italytali.
Dabere na eserese na data sitere na ọmụmụ a, LTE net kachasị na Italytali bụ Tre ikuku ya na akara ngụkọta nke 43,92 (onye mmeri nke onyinye Speedtest). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 isi anyị hụrụ TIM na 32,95 isi, Iliad na 31,34 isi na ọdụ ijuanya Vodafone, nke ruru ule na naanị ihe 30,20. Ihe ndekọ ndị a na-eweta ọtụtụ ihe ịtụnanya na-akụda ọtụtụ clichés: Wind Tre na-ebute ụzọ ma na-eti TIM (onye a na-ewere mgbe niile dị ka onye kacha mma na Italytali) na Vodafone dara ada nke ukwuu, Iliad na-eti ya ihe (mbata ikpeazụ).
Iji kwado data ndị a ma kọwaa ha nke ọma, anyị ga-atụle nke ọzọ onwe ha maka ule ọsọ, nke ahụ bụ ikwu OpenSignal (ndị nwe ngwa a ma ama). Site na ịnweta peeji nke brọdband snapshots, anyị nwere ike ileba anya na mpaghara ndị isi Italy, na-atụle mkpuchi nke ndị ọrụ niile na obodo, ala ịta ahịhịa na ime obodo.
Site na iji nlezianya nyochaa chaatị ndị ahụ, anyị nwere ike ịhụ na Fastweb na TIM na-arụ ọrụ nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile (ọkachasị na mpaghara ala ịta ahịhịa), WindTre nwere ọkwa nke abụọ ọsọ ọsọ na obodo ma na-achịkwa n'ime ime obodo na Vodafone dịkwa na nke a onye ọrụ kachasị njọ (ọ bụrụ na ewepu obodo ndị mepere emepe nke Lombardy na Sicily). Onye na-arụ ọrụ Iliad na-efu na eserese a, a naghị atụle ya maka ule (ọ nwere ike tinye ya n'ọdịnihu).
Etu esi nwalee netwok gi n’onwe gi
Anyị achọghị ịgbaso ntụnye nnwale nnwere onwe ma chọọ 'metụ' ọsọ nke netwọkụ na mpaghara anyị ma ọ bụ n'ụlọ? N'okwu a, anyị na-akwado ka ị jiri mkpuchi na map ọsọ nyere Nperf, dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Site na saịtị a ọ ga-ezu iji họrọ onye ọrụ iji nwalee ma nyochaa ma mkpuchi ntanetị (LTE na LTE Advanced) na ezigbo ọsọ nke ule ndị ọrụ gosipụtara. Ozugbo ị họpụtara onye ọrụ, pịa Mkpuchi netwọk ma ọ bụ ya Budata ọsọ Iji họrọ nnwale nke ị ga-eme wee jiri maapụ dị n'okpuru iji chọta obodo, mpaghara ma ọ bụ n'okporo ámá ebe anyị bi ma ọ bụ ebe anyị chọrọ ịnwale, na-ejikwa ebe ọchụchọ dị n'akụkụ aka ekpe nke elu map. Ngwaọrụ a nwere ike ịba uru dị ukwuu dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na anyị ga-azụta ụlọ ọhụrụ ma ọ bụ mgbazinye, ka anyị wee nwee ike ịlele onye ọrụ dị mma yana ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịgbanwe SIM ka ọ na-edebe nọmba ahụ, dị ka a na-ahụ na ntuziaka ahụ. Etu esi arụ ọrụ ọnụ ọgụgụ ma gbanwee onyinye ekwentị.
N'aka nke ọzọ anyị nwere ike iji ngwa OpenSignal, enwere n'efu maka gam akporo na iPhone.
Site na itinye ngwa a na inye ikike niile dị mkpa, anyị ga-enwe ike ịchọpụta mkpuchi LTE na ọsọ ịntanetị mkpanaka maka okporo ụzọ ma ọ bụ mpaghara ọ bụla na Itali; ịga n'ihu, ihe niile anyị ga - eme bụ imeghe menu na ala mapa, chere maka nchọpụta ọnọdụ anyị wee pịa n'elu menu Ihe niile 2G / 3G / 4G, imehe menu ebe ị nwere ike ịhọrọ onye ọrụ mkpanaka iji nwalee na ụdị netwọk (maka ule a anyị na-akwado ka ị hapụ naanị ihe ahụ 4G).
Site na ule nke ndi otu onwe ha na ule anyi nwere ike iji komputa anyi ma obu smartphone, anyi nwere ike ichota onye oru ntanetị kacha mma maka ógbè anyị, ka anyị wee nwee ike ịnyagharịa ọsọ ọsọ ọ bụla, na-enweghị ịdaba na ọnyà na mgbasa ozi nke Ndị na-arụ ọrụ mgbe mgbe na-aga telivishọn ma ọ bụ redio. Nnyocha onwe onye na-ekwu Wind Tre bụ onye ọrụ ekwentị kacha mma na Italytali, ma a ghaghị iji nlezianya kpachara nsonaazụ a: ọ ka mma iji nlezianya nyochaa mkpuchi ahụ ma hụ na ọ dị mma n'ụlọ anyị ma ọ bụ n'ọfịs anyị.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ netwọkụ mkpanaka ngwa ngwa karịa, anyị ga-elekwasị anya na 5G, nke na-agbasabeghị mana n'ọkwa dị elu karịa 4G; ịmatakwu anyị nwere ike ịgụ ndu anyị Etu esi enyocha mkpuchi 5G.
Ọ bụrụ na, n'ụzọ dị iche, anyị na-achọ ụzọ iji nyochaa mkpuchi fiber optic maka akara akara, anyị na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu anyị Eriri mkpuchi maka TIM, Fastweb, Vodafon, WindTre na ndị ọzọ mi Best Fiber Optic: lelee mkpuchi na onyinye.